K: ပီတိပန်းတွေ လှိုင်လှိုင်ဝေ
လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်မူ အတွက်.. မေမေ ရွတ်ပြ တဲ့ ကဗျာလေးပါ..
အဲဒီ ကဗျာလေးကိုပဲ.. အကျ ကောက်ပြီး.. ထပ်ဆင့် ခံစား လိုက်ပါတယ်။
ပီတိပန်းတွေ လေ.. ဟောဒီ မြေပေါ်မှာ ပွင့်ဖို့..
တအိမ်တယောက်..မျက်ရည်တွေ နေ့တိုင်း လောင်းကြ သတဲ့..
ရာသီ လည်း မညှိ နိုင်တဲ့.. ပီတိပန်းတွေ..
ဘယ်နေ့ မှာ ပွင့်လာလေ မလည်း..
ကောင်းကင်ဘုံ ၌ ပြည့်စုံသကဲ့သို့
ဗြုန်းကနဲဆို.. မြေတပြင်လုံး စိုရွှဲ
မြေပြင် တံခါးချပ်..ပွင့်အာ ထွက်ခဲ့..
အဲဒီ မျက်ရည်တွေပါပဲ.. မိုးပေါ်က..ရွာချ လိုက်တော့မှ ...
အဲဒီ ပီတိပန်းတွေကို အစဉ်ထာဝရ လန်းဆန်းနေစေချင်တယ် မကေ ))
ပီတိပန်း တွေ ပွင့်ခဲ့ပေမဲ့ စိုးရိမ်မိတယ် မကေရေ
လူထုကို လည်း လွတ်လပ်စွာ လမ်းပြ စည်းရုံနိုင်ပါစေ။
လူထုကလည်း သူတို့ တကယ်ချစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်အောက်မှာ နည်းမှန်လမ်းမှန် လိုက်နိုင်ပါစေ လို့ဆန္ဒတွေ ပြု မိတယ် မကေရယ်။
မျက်ရည်မိုး ရွာသွန်းဖြိုးရာက ပီတိပန်းတွေ ဖူးပွင့်။
ဒါဆို အနာဂတ်က အရောင်စုံအသွေးစုံနဲ့ ကျိန်းသေလှပ ထုံမွှမ်းလာတော့မှာ။
အဲဒီပီတိပန်းတွေ ရေရှည်ပွင့်နိုင်ဖို့ သူနဲ့အတူ အများပြည်သူ (ပြည်တွင်း ပြည်ပ) ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အလုပ်အတူ လုပ်ကြရမယ် လို့ မြင်ပါတယ် ကေရေ..
ဘေးအန္တရာယ်လဲ ကင်းရှင်းကြပါစေ၊ မြူမှုန်တမှုန်မျှ အနှောင့်အယှက်မရှိ စေတနာ မေတ္တာ ကြီးမားသလောက် အတူတကွ ၀န် ထမ်းနိုင်ကြပါစေ လို့ ရင်ထဲက ဆုတောင်းပါတယ်။
အမေစု အကြောင်းရေးနေရင်းနဲ့ရင်ထဲမှာ တုန်ပြီး
ဆို့တက်လာတယ်လေ ၊ ရေဆန်ကို ဆန်တက်နေတဲ့ 
ဗေဒါလေးလိုပဲ ၊ လွတ်တဲ့ နေ့ က ဗေဒါရောင်လေး
ရွေးဝတ်ခဲ့ လို့“ မဗေဒါ ” နဲ့တင်စားပြီး
ကဗျာလေးဖတ်ပြီး အမေ့ ရဲ့ ရင်ထဲ အထိ ထိုးစိုက်
မြင်မိတယ်လေ၊ ဘယ်လောက်ပျော်နေမလဲ လို့ ..။
ကြာရှည်လေးမြင့်ရပ်တည်နေနိုင်ပါစေ... လို့ ။
စောကေရဲ. ကဗျာလေးတွေဖတ်ရတာ အားဆေးတခွက်သောက်ရသလိုပါဘဲ
ကဗျာကိုကြိုက်တယ်ဗျာ တင်စားထားချက်တွေက အရမ်းကောင်းတယ် ကျေးဇူးပါ
Thanks Kaytwe, very nice.
မကေရေ ပီတိပန်းဆိုမှ တကယ့်ပီတိပန်းပါပဲ ။